Wararka - Foomka waxyeellada Piston iyo sababta keentay kala-baxa korantada?
1. Noocyada ugu muhiimsan ee dhaawaca piston:
(1) Xagashada dusha sare;
(2) Bistoolada ayaa jabtay;
(3) Dildilaac iyo jarjar ayaa dhacaya
2.Waa maxay sababaha dhaawaca bistoolada?
(1) Saliida Haydarooliga ma ahan mid nadiif ah
Haddii saliida lagu qaso wasakhda, mar haddii wasakhyadan soo galaan farqiga u dhexeeya piston iyo silsiladda, waxay keenaysaa in bistooladdu miiqdo. Cadaadiska lagu sameeyay kiiskan wuxuu leeyahay astaamaha soo socda: guud ahaan waxaa jiri doona jeexdinyo qoto dheer oo ka badan 0.1mm, nambarkuna wuu yar yahay, dhererkiisuna wuxuu qiyaas ahaan u dhigmaa istaroogga feerka. Macaamiisha waxaa lagula talinayaa inay si joogto ah u hubiyaan una bedelaan saliida haydka ee qodista
(2) Farqiga u dhexeeya bistoolada iyo silsiladda ayaa aad u yar
Xaaladdaani badanaa waxay dhacdaa markii bistoolad cusub la beddelo. Haddii farqiga u dhexeeya bistoolada iyo silsiladdu aad u yar yihiin, way fududahay in la keeno noocyo marka farqiga u isbeddelo maadaama heerkulka saliidda uu kaco inta lagu jiro hawlgalka. Astaamaheeda garta waa: qotoda dheer ee calaamadda soo jiidashada waa mid gacmeed, aaggu waa ballaaran yahay, dhererkiisuna wuxuu qiyaas ahaan u dhigmaa istaroogga baastooladda. Waxaa lagugula talinayaa in macmiilku raadsado sayid xirfad leh oo bedela, faraqa dulqaadkuna waa inuu noqdaa meel udhaxeysa
(3) Qalafsanaanta bistoolada iyo silsiladdu way hooseysaa
Bistooladda waxaa lagu qasbay xoog dibedda ah inta lagu gudajiro dhaqdhaqaaqa, adkaanshaha dusha sare ee piston iyo silsiladuna wuu hooseeya, taas oo u nugul culeyska. Sifooyinkiisa waa: qoto-dheer iyo dhul ballaaran
(4) Nidaamka sifaynta oo soosaara
Nidaamka sifaynta qalabka isdifaaca ee haydinka ayaa khaldan, giraanta piston-ka sifiican looma saliibin, mana jiro filim saliid difaaca ah oo la sameeyay, taasoo dhalisay isku dhac qallalan, oo sababa giraanta qalabka furaha korontada jabiya
haddii bistooladdu waxyeello soo gaadhay, fadlan ku beddel bistoolad cusub isla markiiba.